भविष्य मा माइक्रोसफ्ट | Martech Zone
बिहीबार, अक्टुबर 20, 2011 बिहीबार, अक्टुबर 20, 2011 Douglas Karr
म माईक्रोसफ्ट पर्याप्त मा उल्लेख छैन Martech Zone। यो वास्तवमै बहाना छैन किनभने कम्पनी पहिले नै एक विशाल पदचिह्न छ। लिक्विडस्पेसको सीओओसँग कुराकानी गर्दा, डग मारिनारो, र गत हप्ता बोल्दै जोश वाल्डोमाईक्रोसफ्टले साना व्यवसाय मालिकसँग जग बसाल्न केही अविश्वसनीय चालहरू गरिरहेको छ। कम्पनीहरूको जीवनमा प्रारम्भिक यो लगानी एक हो जुन भविष्यमा माइक्रोसफ्टको लागि ठूलो पैसा तिर्नेछ।
जोश वाल्डो एसएमबी (सानो र मध्यम आकारको व्यवसाय) ग्राहक र समाधान पार्टनर मार्केटिंग निर्देशक थिए (उनी अब माइक्रोसफ्टको नयाँ मार्केट्स र इमिर्जि Channel च्यानलहरूको वरिष्ठ निर्देशक हुन्)। जोशले मसँग केहि अंकहरू साझेदारी गर्नुभयो जुन चौंकाइरहेका थिए ... माइक्रोसफ्टको $ .9.5। Spending बिलियन (बीको साथ) अहिले अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्नुहोस्। अझ चकित पार्ने कुरा के हो भने त्यो बजेटको to० देखि 70 ०% बादलको वरिपरि केन्द्रित हुनेछ! वाह।
Microsoft ले SMBs सँग कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेको एउटा उदाहरण हो बिजस्पार्क.
प्रारम्भिक चरणको टेक्नोलोजी स्टार्टअपलाई माइक्रोसफ्ट सफ्टवेयरको साथ सफल हुन मद्दतको लागि, बिजस्पार्कले विश्वभरका साझेदारहरूको समुदायमा पहुँच सक्षम गर्दछ - सबै सफ्टवेयर ईन्धनको आविष्कारलाई समर्थन गर्दछ र टेक्नोलोजी उद्यमीहरूको आउँदो पुस्तालाई समर्थन गर्दछ।
केही पार्टनर कम्पनीहरू एकदम अचम्मका छन्:
एक्सेरो लेखा, बिलि and र बैंकि software सफ्टवेयर
Gust - एक स्टार्टअप प्रोफाइल सिर्जना गर्न र ,35,000 XNUMX,००० लगानीकर्ताहरूसँग कनेक्ट हुनको लागि ठाउँ।
Mopapp - सबै मोबाईल बजारमा बिक्री ट्र्याक गर्नको लागि अनुप्रयोग।
LawPivot - व्यवसायको लागि क्राउडसोर्स गरिएको कानुनी स्रोत।
oDesk - विकास सेवाबाट ग्राहक सेवामा केहि पनि रिमोट स्टाफिंग संसाधनहरूसँग जडान गर्नको लागि साइट।
बीउडलाई सहयोग पुर्‍याउने, सुरूवात गर्ने कम्पनीहरूलाई सहयोग पुर्याउने र प्रक्षेपण गर्ने संगठनहरूको उल्लेख नगर्न। यहाँ इन्डियानापोलिसमा हामीले यी मध्ये एउटाको सफलता देख्यौं - स्टार्ट अप सप्ताहांत.
बिजस्पार्कले केवल पैसालाई, उत्पादनहरू वा साझेदारहरूलाई व्यवसायहरू जोड्दै आएको छैन, यसले यी कम्पनीहरूलाई उनीहरूको प्रशिक्षण र मार्केटि needs आवश्यकताहरू पनि मद्दत गर्दछ। साईन ईन गर्नुहोस् र तपाईं घटनाको एक अद्भुत सूची पाउनुहुनेछ र तपाईंको क्षेत्रमा सही स्रोतहरू एक सफल व्यवसाय सुरूवातको साथ सहयोग गर्न। बिजस्पार्कले विद्यार्थीहरूलाई व्यवसायमा पनि जोड्दै छ। यसको बारेमा सोच्नुहोस् ... विद्यार्थीदेखि सुरुको सानो व्यवसायसम्म, Microsoft ले व्यवसायलाई उनीहरूलाई आवश्यक सबै सहयोग दिइरहेको छ। त्यो एकदम रणनीति हो!
ती मध्ये एउटा व्यवसाय थियो लिक्विडस्पेस, एक शानदार अनुप्रयोग जुन यसमा निर्मित छ विन्डोज एज्योर प्लेटफर्म। लिक्विडस्पेस दुबै साइट र मोबाइल अनुप्रयोग हो जहाँ मोबाइल कामदारहरूले काम गर्न एक ठाउँ पाउन सक्छन्, यो नि: शुल्क छ, केहि घण्टाको लागि उपलब्ध छ, एक दिन वा अधिक। मोबाइल अनुप्रयोग स्थान सक्षम छ, ताकि तपाईं एक शहर मा उडान र केही समय मा उपलब्ध ठाउँ पप अप गर्न सक्नुहुन्छ।
कोठाको साथ कम्पनीहरू र वाणिज्यिक सम्पत्ति मालिकहरूले लिक्विडस्पेसमा आफ्नो उपलब्धता पोष्ट गर्न सक्दछन्। यो खाली छ यदि ठाउँ खाली छ। यदि अन्तरिक्षले पैसा खर्च गरेमा, लिक्विडस्पेसले राजस्वको प्रतिशत प्राप्त गर्दछ। लिक्विडस्पेस सह-संस्थापक र सीओओ डग मारिनारोसँग कुरा गर्दा, तिनीहरू बिजस्पार्कमा सामेल भए र चाँडै नै एजुरे प्लेटफर्म अपनाए। कोषको funding हप्तामा, लिक्विडस्पेस बीटा थियो। डग भने लागत थियो उसको मोबाइल फोन बिल भन्दा कम.
लिक्विडस्पेससँग अब २०० भन्दा बढी दर्ता भएका स्थानहरू छन्, प्राय: क्यालिफोर्नियामा। यस कम्पनीमा अहिले २० कर्मचारी छन् जुन मिनेयापोलिसदेखि मिन्स्कको बीचमा पालो अल्टोमा रहेको मुख्यालयको साथ काम गरिरहेका छन्। डगले प्लेटफर्म र माइक्रोसफ्टसँग काम गर्ने बारेमा सब भन्दा राम्रो कुरा भनेको उनी टेक्नोलोजीको बारेमा चिन्ता गर्नुको सट्टा व्यापार बढाउनमा केन्द्रित गर्न सक्षम भएको छ। ऊ ढुक्क छ कि एजुरे प्लेटफर्मको स्केलेबिलिटी कम्पनीको साथ वर्षौंसम्म सस्तो हुँदै गयो।
माईक्रोसफ्ट अझर प्लेटफार्ममा अधिक:
यदि तपाईं निजी रूपमा आयोजित हुनुहुन्छ भने, तीन बर्ष भन्दा कम उमेरको, $ 1M भन्दा कम बनाउने र सफ्टवेयर विकास गर्दै ... तपाईं सक्नुहुन्छ तपाइँको BizSpark सदस्यता को लागी अब साइन अप गर्नुहोस्.
टैग: AUDसिनेमाइयुरोअमेरिकी डलर